वैद्य किन चीन गए ? - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
वैद्य किन चीन गए ?
एकीकृत नेकपा माओवादीबाट फुटेर गएको नयाँ नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण आइतबारदेखि चीन भ्रमणमा गएका छन् । उनको चीन भ्रमण लगत्तै राजनीतिक वृत्तमा अनेकौं चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका दक्षिण एशिया मामिला प्रमुख आइपिङ्ग दुई साता अगाडि नेपाल आउँदा वैद्यलाई चीन भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको कुरा त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको थियो । आइ पिङ्गले वैद्यलाई मात्र निमन्त्रणा दिएका हुन् कि अरु पार्टीका नेतालाई पनि आमन्त्रण गरेका हुन् ? भन्नेहरुले त भन्छन् – हामीलाई पनि निम्ता थियो । तर वैद्य हत्तारिँदै किन चीन गए ?
एकातिर एकीकृत माओवादीको विस्तारित बैठक काठमाडौंमा जारी रहेका बखत वैद्यको यो भ्रमणको सन्देश अनेकौं हुन सक्छ । चीनले बलियो मित्रताको लागि आफ्नो प्रभुत्व बढाउने विश्वासिलो शक्ति वैद्य नेतृत्व पार्टीलाई बताउन चाहेको हुन्छ । वैद्य पुरातन कम्युनिष्ट हुन् । उनको विश्लेषणमा चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको शासन छैन । उनलाई नरम बनाउने चाल प्रचण्डको हुनसक्छ । त्यसैले प्रचण्डको ग्राण्ड डिजाइनमा वैद्यलाई चीन बोलाएर माओवादी पार्टी मिलाउन चीनले भित्री योजनाका साथ वैद्यलाई सम्झाउन चीन बोलाएको पनि हुनसक्छ । चीन विश्वको महाशक्तिका लागि प्रतिस्पर्धी देश हो नेपालमा अस्थिरता होला र त्यो अस्थिरता वैद्यको पार्टीका कारण नेपालमा गोलमाल होला । त्यही गोलमालका बीचमा विदेशी शक्ति नेपाल भित्रिन सक्छ भन्ने विश्लेषण चीनको हुनसक्छ । त्यसैले यी सबै सूचनाका आधारमा वैद्यलाई चीन भ्रमणका अवसरमा स्पष्ट पार्न चीनले आमन्त्रण गरेको पनि हुनसक्छ ।
नेपालको स्थायित्व विकास र सम्बृद्धि चीनले चाहन्छ । चीन माओवादी फुटेकोमा चिन्तित र दुःखित छ । त्यसैले यावत कुराहरु वैद्यलाई बताएर सबैभन्दा विश्वासिलो बनाउने योजनाका साथ चीन लागेको हुन सक्छ । किनभने चीन नेपालमा विश्वासिलो शक्तिको खोजीमा छ । वैद्यलाई चीन बोलाएर चीनले के सन्देश दिन खोजेको होला त्यो कुरा वैद्य बा नेपाल फर्किएपछि मात्र होइन उनको पार्टीले लिने रणनीति र कार्यनीतिले भोलिका दिनमा स्पष्ट पार्नेछ ।